Ogaden News Agency (ONA) – Qudbadii Madaxa Jaaliyada London ee shirkii Lagu soo dhaweeyay Madaxda JWXO
Qudbadii Madaxa Jaaliyada London ee shirkii Lagu soo dhaweeyay Madaxda JWXO
Marwooyin iyo mudanayaal, marka ugu horeysa waxaan salaan halgameed, mid walaaltinimo iyo mid karaamo lehba ku salaamayaa madaxda JWXO oo uu u horeeyo Guddoomiyaha JWXO admiral Maxamed Cumar Cismaan, Guddoomiye ku xigeenka JWXO ahna Guddoomiyaha Jaaliyadaha iyo Arrimaha Ururka Mudane Maxamed Ismaacil Cumar, waxaana leeyahay Mudane ku soo dhawoow Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee London UK, Waxaan kale oon salaamayaa Mudane Cabiraxmaan mahdi, , Mudane Axmed Yaasin Seikh Ibraahin , Mudane Maxamed Yaasin (Xaaji Diirane) iyo dhamaan Xubnaha Golaha dhexe JWXO ee kasoo qayb-galay shirkan.
Waxaan sidoo kale salaamaya Aqoonyahanka, Odayaasha, Culumada, Haweenka, Dhalinyarada iyo dhamaan wax garadka Soomaalida Ogaadeeniya iyo bulshada Soomaali weyn ee shirkan qiimiha badan inagala soo qeyb galay maanta. Waxaana leeyahay ku soo dhawaada shirkeena manta idinka oo mahadsan.
Shirkan, waxaa soo agaasimay jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee Uk, ulajeedada ugu horeysa ee aan ka leenahayna waxa weeye inaan xog ku kala qaadano inaga oo maanta nasiib u helnay inaan helno Madaxdii ugu sareysay oo uu iskugu jira Guddi-fulin iyo xildhibaano JWXO iyo waliba masuuliyiin badan oo shaqooyin kala gadisan ka haya ururka JWXO. Maanta waxaan uga faaideysan doonna madaxdeena sharafta badan inaan ka helno warbixino inana ay inaga dhageystaan dareenkeena iyo afkaaraha lagu xoojinayo halganka Muqadaska ah.
Hadii aan wax yar ka idhaahdo jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee Uk. Jaaliyadda Soomaalia ogaadeniya waa jaaliyad kamid ah buslhada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka UK. Olole iyo barnaamijyo badan oo kala gadisan waxaan ka wadnaa degaanadan aan ku noolnahay. Xaruntan aan maanta ku suganahay waa xarun kamid ah jaaliyadda Soomaalia Ogaadeeniya ee Uk, Xarumo kalena waxaan ku leenahay Gobolada kale ee UK.
Waa xarun u furan dhamaan dadka somaaliyeed ee ku nool deegaankan, waxaa kasocda casharo diini ah, tuition iyo tababaro, dhaqankeena soomaliyeed aad loo muujiyo, waxaan filayaa dhanaamteen inaan ka wada dharagsanahay Ruwaayadaha Mashraxiyada ah ee ururka OSYU uu si joogta ah u soo saaro, Waxay Jaaliyaadan bixisaa service badan oo loo sameeyo bulshadeena soomaliyeed. Marka waxaan leenahay dhamaantiin minankan minankiina waaye kusoo dhawaada.
Sidoo kale jaaliyadu waxay u taagantahay sidii dadkeena gudaha ku tabaaleysan cod aan ugu noqon laheyn. Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniya ee UK waxa ay xidhiidho joogta ah la sameysaa dowlada iyada oo lagala hadlo sidii isbadal siyaasi iyo mid bani’aadanimo lehba loogu sameyn lahaa dalka Ethiopia. Waxaa kulamo dhageysi ah lagu sameeyay Guriga Baarlamaanka UK.
Jaaliyaddu waxay awood u heshay in lobby ka dhex sameyso Guriga Baarlamaanka UK si deeqda dhaqaale ee dalka Ethiopia lasiiyo loo joojiyo. Waxaana shaqooyinkaas kasoo baxay oo guul ah in dalka Ethiopia lacagtii deeqda aheyd ee lasiinayay in qeybo kamid ah laga jaray.qeybtaas oo kamid ah lacagtii tooska loosiinayay ciidamada Ethiopia iyo waliba liyu Poliska. Waxaan rajeynaynaa in cadaadiskaas lasii xoojiyo illaa xuquuqda aadanaha ee shacabka Soomaalida Ogaadeeniya la dhowro.
Olalaha lagu dhowrayo Xuquuqda Aadanaha Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya waxynu u marnaa dhowr nidaam oo kal ah:
1. Wacyigalin guud oo lasiinayo Bulshadeena,
Iyada wacyigalintaas lagu soo bandhigo kulamo, shirar sida kan oo kale ah, iyo siminaaro lasiinayo bulshada oo xarumaha jaaliyadaha lagu qabto, Jaamacadaha ama Xarumaha Xuquuqul Insaanka sida Guriga Amnesty oo kale.
2. Banaanbaxyo Jaaliyadu soo iclaamiso midkaas oo sanadkiiba ugu yaraan laba jeer dhaca. Waxaa lagu qabtaa banana-baxyadaas Guriga Baarlamaanka UK, Downing Street, Safaarada Gumeysga Ethiopia Sidoo kale waxaa lagu qabtaa Xarunta UN-t ee Geneva, Guriga Baarlamanka Europe. Kulamada G8 ama G20 iyo markasta oo wufuud Ethiopia ka timaado.
3. Lobying, xidhiidhka Hay’adaha Dowliga ah sida Xubnaha Baarlamaanka, Wasaarada Deeqda DFID, Diyaarinta Kulamo ka dhaca Guriga Baarlamaanka.
4. Media, Jaaliyaddu waxay joogteysa xidhiidhka saxaafada dalka UK iyada oo aan suurto galinay in si toos ah loogu soo qaato Tv-yada iyo Joornaalada dalkan UK ka soo baxa.
Jaaliyadu waxay diyaarisaa Filimaan looga hadlayo Tacadiyada iyada oo si wada jira u diyaariyaan Hay’ado ama Xubno suxufiyiin ah filimaan ka hadlaya qaddiyada Soomaalida Ogaadeeniya.
5. Jaaliyadu waxay dhiira-galisaa saaxibaha xiiseynaya sidii ay wax uga oggaan lahaayeen qaddiyada Soomaalida Ogaadeeniya ama hayadaha arrimahaas ka qeyb qaadanaya.
Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee ku nool UK waxay muujiyeen garabna taaganyihiin taagerada hiil iyo hooba leh ee la garab taaganyihiin ururkeena JWXO ee u taagan sidii loo dhowri lahaa sharafta iyo karaamada Soomaalida Ogaadeeniya iyo sidiii aan ugu naaloon laheyn anaga oo xor ah dalkeena hooyo.
Waxaan ka codsanaynaa Shacab-weynaha Soomaliyeed ee ku nool dalka UK inay ku soo xidhmaan halganka ay hormuudka katahay JWXO kana qeyb qaataan illaalinta xuquuqda aadanaha gabdhahooda soomaliyeed ee lagu dhibaateynayo gudaha Ogaadeeniya. Sida aad ka war heysaan gumeysiga manaxa ah ee cawaanka ah waxa uu daggaalkiisi oo dhan isugu geeyay sidii uu u wax yeeleyn lahaa gabdhaha sharafta iyo cisiga mudan ee soomaliyeed.
Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee UK waxay bilowday olole ay ku wacyi galinayso bulshada iyo beesha caalamka, Barnaamijkaas oo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda haweenka.
Ruwaayadii Mashraxiyadda aheyd ee Ilmahayga Hooyo Miyaan Odhan Karaa ee ururka OYSU UK kusoo saareen waxa ay qeyb ka ahayd ololahaas.
Waxaa Jira filimaan laga soo diyaariyay Gudaha Ogadeniya oo ka hadlaya xuquuqda haweenka Ogadeniya,Filimadan waxaa wada jir u diyaariyay dad ajanabi ah iyo Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeeniya ee London UK, Laba filim oo soo baxaya bishan June Qeybweyna ay ka yihiin ururka haweenka UHO iyo OYSU.,Filimadan mid kamid ah oo hordhac ah waxaa laga daaray Guriga Baarlamaanka Europe. Waxaana hada balansanahay Guriga Baarlamaanka UK bisha June oo lagu soo bandhigi doono filimadaas Haduu Allah idmo.
Waxaan ka codsaneynaa bulshada soomaliyeed inaysan la bakheylin codkooda, oo qeyb ka noqdaan cadaadiska dalkan UK lagu saarayo Ethiopia Si loo dhowro xuquuqda haweenka iyo guud ahaan-ba si loo joojiyo tacadiyada gumeysiga Ethiopia kulakacdo Shacabka Soomaliyeed ee gumeysiga mudada dheer ku hoos jiray.
Shirka Waa innoo furanyahay.
Gudomiyaha Jaaliyada London.